डा.अरुणा उप्रेती Archives - NewsPolar NewsPolar
१० वर्षअघि मेरी छोरीले दुःखी भएर मसँग भनेकी थिइन्– ‘आमा, तपाईलाई त कति मान्छेले कोदे बूढी भन्छन्। तपाईंले कोदो र फापरबारे धेरै कुरा गर्ने भएकोले।’ उनको उदास अनुहार देखेर मैले भनेकी थिएँ– ‘यस्तो कुरामा त म गर्व गर्छु। कोदो, फापर त राम्रा अन्न हुन्। यसको महत्व नबुझेर पो मानिसले हेपेका
योग दिवस र महिला स्वास्थ्य
गाउँघरका महिलाले योगका सबै आसन गरेको देखिन्छ । उनीहरू निहुरेर, टुक्रुक्क बसेर काम गर्छन् । घाँस, दाउरा गर्न कताकता जान्छन्
सडक दुर्घटनाको अर्थशास्त्र
दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्रलाई त बनाउनै हुँदैन, बरु सकिन्छ भने नेपालका अन्य भागमा पनि 'दुर्घटना कुना'भनेर सडक बनाउनुपर्छ। गाउँका गन्यमान्य व्यक्ति मिलेर
किन रोज्दैछन् यूवाले आत्महत्याको बाटो ?
यसरी युवाले पढाइको दबाबमा आमा–बाको सपना पूरा गर्न नसक्दा आफ्नै जीवनसँग हारेर आत्महत्या गरिरहेका छन् । समाजमा इज्जत बचाउन आफ्ना
सौन्दर्य प्रशाधन भर्सेज सुन्दरी प्रतियोगिता र समाज सेवा
सौन्दर्य प्रशाधन कम्पनीलाई कुन देशमा आफ्नो व्यापार फैलाउनु छ, त्यहाँका महिलालाई ‘सौन्दर्यप्रति जागरुक गराएर त्यहींका महिलालाई ‘विश्व सुन्दरी’, ‘ब्रह्माण्ड सुन्दरी’
कठै महिला स्वास्थ्य…चुनावमा नसमेटिने ?
अहिले उनीहरू ‘इन्ज्वायमेन्ट जोन’ अर्थात् ‘यौनको मैदान’ खोलेर पर्यटकलाई आनन्द र महिलालाई आर्थिक अवसर दिन उद्यत छन् । यस्ता नेताले
परम्परागत खाना किन छ स्वस्थकर ?
कोरोना महामारीको समयमा धेरै नेपालीले बेसार, मरिच, दालचिनी आदि मसलाको बारेमा धेरै चासो दिए र प्रयोग गरे, जुन हाम्रो परम्परागत